Uluhlu lwe-Apple Watch 2 idibanisa iiNtengiso zeeholide
I-Apple ikhuphe izibhengezo ezimbini zeziganeko zee-Apple Watch Series 2, ezithemba ukuba ziya kunceda ubuninzi kwaye zijongise ngakumbi.
Uluhlu lwe-Apple Watch 2
I-Cupertino tech goliath inokwenza ubuninzi bezinzuzo zayo kwi-iPhone yazo enkulu eyenziwa kulo nyaka kunye nokufika kwe-iPhone 7 kunye ne-7 Plus kunye neekhamera eziphindwe kabini, nangona kunjalo yiyo yonke i-akhawunti ehamba nayo yonke into ukuzisa i-smartwatch yayo kunye nokulawula i-gossipy tidbits engaziwa njengemibango yenhlangano.
Ekupheleni kwexesha, ukunikezelwa kwazo zonke ii-smartwatches - kungekhona kuphela i-Apple - ziye zajikeleza ngaphezu kwe-50 ipesenti. I-aplani entsha ye-Apple yokukhushulwa ekhutshwe kwiprofayili ngoLwesihlanu yayo i-Apple Watch Series 2 "njengendlela ecacileyo yobomi begadget."
I-10-kwi-16-yesibini irekodi ifaka indawo kwizinto ezinjengeLos Angeles kunye ne-Asia, studio yokuhamba, kunye ne-external football co-ordinate. Ukuphakanyiswa kwongezelela ukugxila okukhethiweyo kwento leyo, kunye nomgcini owuvulayo njengentsikelelo-ukuphakamisa ukuba kuya kuba yinto engenakwenzeka kwiKrisimesi!
I-Mashable iqinisekiswe ukuba i-Apple Watch iye yaqhuba ngokubonisa i-smartwatch showcase, nangona umbutho unqabile ukufumanisa amanani osebenza ngokwenene kwigajethi yayo, eyenza uninzi lokungaqiniseki kwayo.
Nangona kunjalo, i-Apple CEO uTim Cook isiqinisekisile ngokuqinisekileyo ngoLwesibili nge-imeyile ye-Reuters ukuba "ulwazi lwayo lubonisa ukuba i-Apple Watch yenza okungaqhelekanga kwaye ibonakala iyimimiselo phakathi kwezona zihlandlo eziqhelekileyo kulo nyaka."
"Iiprojekthi zophuhliso ziyacima iirafu. Inyaniso iya kuxelwa, phakathi kweveki eyintloko yokuthenga i-Krismesi, isibonelelo sethu nge-Apple Watch sasivelele ngakumbi kunaliphi na iveki kwimbali yembali. Okubaluleke ngakumbi, njengoko silindele, sisendleleni yekota engcono kunazo zonke kwi-Apple Watch, "i-Cook iqulunqwe.
I-CEO ye-Facebook uMark Zuckerberg Yakha "iJarvis" i-Software Butler yekhaya lakhe